प्यार मानिस कल?
मान्छे एक लामो समय को लागि सँगै हुँदा, र तिनीहरूलाई बीच त्यहाँ न्यानो प्राण र भावनात्मक जडान छ, तपाईंको तपाईं एक नजिक प्रेम भन्ने तथ्यलाई जोड केही तरिका मा एक आवश्यकता छ। यो अक्सर, विभिन्न की मा नै प्रकट कहिलेकाहीं सबैभन्दा अविश्वसनीय, तर मा नै समय कोमल र सुखद उपनाम, केवल दुई मानिसहरूलाई जानिन्छ जो।
तथ्याङ्क अनुसार, महिला अक्सर अप मान्छे को लागि मायालु उपनाम संग, महिला भावनात्मक घनिष्ठताका थप खतरा हो र सम्बन्ध थप खुला हुन गर्छन किनभने आउनुहोस्। साथी, बारी मा, यो रमाइलो खेल समर्थन गर्छन र प्रतिक्रिया उपनाम साथ आउँछन्। यी कोमल नाम आफ्नै हो र केही गोप्य अर्थ हो किनभने यो, पति र पत्नी वा एक प्रियजनहरूलाई बीच घनिष्ठ सम्बन्ध सेट गर्छ।
यस अवसरमा, त्यहाँ Jokes र जोडे बीच मायालु नाम त असामान्य र हास्यास्पद हामी त्यो रुचि रूपमा, एक मनपर्ने यो कल गर्न कहिल्यै भयो होला भनेर हो किनभने विनोदी कथाहरू धेरै छन्!
तथापि, यो मूल्य तपाईं धेरै नजिक छैनन् भने मानिसहरू आफ्नो लक्ष्य केही छ कि एक उपनाम कल भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ छ, तपाईं थाहा छ। पक्कै पनि तपाईं यो विषयमा पुरानो उपाख्यान सम्झना: एक मान्छे "बनी" तपाईंलाई कल राख्छ भने, शायद उनले आफ्नो नाम सम्झना गर्छ?!
यहाँ यो परिस्थितिमा अनुसार कार्य गर्न आवश्यक छ, तर ... यो तपाईं मिल्दो भने, त्यसपछि केही विचार।
यो अक्सर प्रयोग र तिनीहरूले अर्थ हुन सक्छ के के उपनाम कसरी कोमलतासाथ भनिन्छ मानिस, कुरा राम्रो छ।
मानिसहरूसँग अनुभव आफ्नो धेरै वर्ष प्रयोग, म सबै उहाँले चाहनुहुन्छ, जो तपाई संग आएको, तर यसलाई हुन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। सबै शब्द उच्चारण छ, जो संग टोन मा कुरा। उदाहरणका लागि, तपाईं भान्सा "glutton!" मा जोडले र ठूलो स्वरमा भन्न भने, म, यो असम्भाव्य उहाँलाई राम्रो हुनेछ कि, र सारा साँझ एक अपमान हुनेछ लाग्छ। तर बिस्तारै आफ्नो कान, "मेरो obzhorik" मा whispered यदि, तपाईं विपरीत प्रभाव, थप रमाइलो प्राप्त हुनेछ।
अक्सर, यो आवश्यक छैन विशेष आविष्कार गर्न, प्यार यो मानिसलाई भनिन्छ छ, मायालु उपनाम जोडी भित्र आयो गरेको के वा परिस्थिति सम्बन्ध आफूलाई द्वारा देखिन्छन्।
र यो हो भन्दा साधारण भनेर उपनाम पूर्ण सूची छैन:
खरायो, खरायो, Zaya, बच्चा - सधैं प्रसन्न, बरु banal। गरेको बस अल्छी लागि, भन्न गरौं। "Bunnies" अक्सर महिलाहरु बीचमा र मानिसहरूलाई पाउन सकिन्छ।
बिल्ली को बच्चा, बिरालो, Kotya, kotyatina, The Pussycat, बिल्ली बिरालो, हामीले kysik - पक्कै बिस्तारै र दयालु। हामीलाई धेरै स्थापित गर्न अनुमति घनिष्ठ सम्बन्ध।
Lapusechka, Lialechka, lisenochek, pupsichek र त्यसपछि सबै को प्रत्यय "Cheka" समाप्त हुन्छ कि, "जाँच गर्नुहोस्", आदि मेरो विचारमा पनि चीनी सदृश र नक्कली यद्यपि, यो स्वाद को एक कुरा हो छ। जस्तै केही मानिसहरू!
र रूपमा प्यार मानिस भनिन्छ, असाधारण र flirtatious थियो?
यसो गर्न, तपाईं उपस्थिति, वर्ण वा व्यवहार को आफ्नो व्यक्तिगत गुण मा आधारित सबै भन्दा गैर-मानक उपनाम साथ आउन छन्।
त्यसैले म "Baldy", "बार", "lohmatulikom", "मरिच", धेरै "स्काउट" संग पनि एक "dobrynchikom" (यो स्पष्ट मान्छे साँच्चै एक खेलाडी थियो, Dobrynya Nikitich बाट लिइएको हो) सामना गर्न भएको थियो।
तपाईं यसलाई प्यार मानिस भनिन्छ रूपमा उल्लेखनीय मुद्दाहरू अझै पनि छन् भने, म यसलाई सधैं पाठ्यक्रम, तपाईं हास्य, असीम कल्पना, राम्रो, पाठ्यक्रम, साधारण अर्थमा आफ्नो अर्थमा प्रयोग प्रदान गर्न मद्दत गर्छ, तपाईं पशु संसारमा लागू गर्न सल्लाह।
र अन्त मा म यसलाई प्यार मानिस भनिन्छ, विचार फर्केर जान चाहन्छु। म सुरुमा भने जस्तै, उपनाम छैन यो छ र यसलाई के मतलब शब्द को ती राम्रो छ, र तपाईंले यसलाई कसरी उच्चारण गर्छन्!
र यदि तपाईं बिस्तारै, बिस्तारै आफ्नो प्रिय गर्न लेकानेखुसीगर्छ: muhomorchik, penechek, pionerchik, केक, कार्टून, pultik, पेट, मेरो ... तपाईं को आश्वासन दिए आराम गर्न सक्छन् gopher're - यो ढल्छ र तपाईं चाहनुहुन्छ जे लागि के गर्नेछ!
सही मान्छे। यसलाई कसरी हुनुपर्छ?
तपाईं एक सम्बन्ध प्रवेश गर्नु अघि सोध्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू
सुझाव भएकालाई। केटी तपाईं पछि चलिरहेको थियो बनाउन कसरी
उनको सौन्दर्य मा एक केटी बधाई। उनको ध्यान पुरस्कृत
कसरी रोचक हुन: मान्छे पेन सोध्न के
एक केटी संग व्यवहार कसरी गर्ने?
संगठनात्मक संघर्ष: कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
घर मा सलेदो कसरी बनाउने? आफ्नो हातमा मोमबत्ती लागि Wick
होटल कोरल सागर जल विश्व (मिश्र): विवरण, फोटो र समीक्षा
के "Eosinophils छोराछोरीको उच्च छन्" वाक्यांश गर्छ? यो डरलाग्दो छ?
, सांस्कृतिक कर्पोरेट र कानुनी संस्कृति को प्रकार
सबै कुरा जान्छ, र यो पास हुनेछ, वा ऐतिहासिकवाद के हो?
यस नवजात गर्न हानि बिना स्तनपान गर्दा कसरी वजन गर्न
आफ्नो खाल मा आलु: रोमान्टिक विनम्रता
Warface: आवश्यकताहरु र जारी मिति
घरमा सीधा बाल लागि प्रभावकारी मास्क
स्मृति को व्यक्तिगत सुविधाहरू। उमेर स्मृति विशेषताहरु
कला। 113 TC आरएफ। सप्ताहन्तमा र सार्वजनिक बिदा मा काम को निषेध